YouTube ကို | October 2019
ပုံမှန်အားဖြင့်, YouTube ကိုအလိုအလျှောက်သင်သည်သင်၏အကောင့်သို့ logged နေကြသည်ပေး, သင်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုစုံစမ်းမှုရိုက်နှိပ်ပြီးပြီဘယ်အရာကိုကယ်တင်ထုတ်လွှင့်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဤအင်္ဂါရပ်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲ scan မှတ်တမ်းများများ၏စာရင်းရှင်းလင်းချင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့ကကွန်ပျူတာကနေများနှင့်မိုဘိုင်း application ကိုမှတဆင့်ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
ယူကျု့ဗီဒီယိုကလစ်ပ်ကြည့်ရှု add ဖို့မသာယင်း၏အသုံးပြုသူများကကမ်းလှမ်းပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ဗီဒီယိုစာတန်းထိုး၏ဖန်ဆင်းခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလူစိမ်း။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနှင့်နိုင်ငံခြား၌ရှိသကဲ့သို့ရိုးရှင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်ကသာစာသားကိုနှင့်စတင်ပစ္စည်းများ၏ကြာချိန်ပမာဏအပေါ်မူတည်လွန်းရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး။
Google ကဝန်ထမ်းကိုယ်ထိလက်ရောက်အသုံးပြုသူများကိုပြန့်နှံ့သမျှသောအကြောင်းအရာခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်မရှိကြပါဘူး။ ထိုကြောင့်, သင်တစ်ခါတစ်ရံဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်သင့်တိုင်းပြည်ပညတ်တရား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဗွီဒီယိုကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ပါကချန်နယ်တိုင်ကြားအကြံပြုလိုတယ်, အအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတူ Non-လိုက်နာမှုအကြောင်းကြားနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်သင့်လျော်သောကန့်သတ်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
YouTube ကိုရှာဖွေရေး options များပေါ်
YouTube ပေါ်မှာရှာဖွေရေးအတွက်ဝင်ဖြစ်ကြောင်းအထူးသော့ချက်စာလုံးများသင်သည်သင်၏တောင်းဆိုမှုကို၏တစ်ဦးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်ရလဒ်ရရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဗီဒီယိုကိုအရည်အသွေး, ကြာချိန်နှင့်ထို့ထက် ပို. အဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဤအသော့ချက်စာလုံးများကိုသိရှိ, သင်လျင်မြန်စွာလိုချင်သောဗီဒီယိုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရဲ့အသေးစိတ်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။
Site ပေါ်တွင် YouTube ဗီဒီယိုကိုထည့်သွင်းပါ
YouTube ကိုတခြားဆိုက်များပေါ်တွင်သင်၏ဗီဒီယိုများအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်စွမ်းများကိုအပေါငျးတို့သက်ဘ်ဆိုက်များမှတို့သည်ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကနှစ်ခုယုန်မှာသတ် - ဆိုက်အမှတ်ပေးမပါဘဲနှင့်သင့် server ကိုရိုက်တဲ့ပြီးရင်မပါဘဲဗီဒီယိုစီးဆင်းမှုစွမ်းရည်ရှိပါတယ်နေချိန်မှာယူကျု့ဗီဒီယို hosting အတွက်, ဝေးက၎င်း၏ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန် diverges ။
သင့် Google account တစ်ခု register အကယ်. မှားယွင်းစွာမှားအသက်အရွယ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးမရှိတော့ YouTube ပေါ်မှာအချို့သောဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဒီအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူသာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ setting တွင်အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရဲ့ YouTube ပေါ်မှာမွေးရက်စွဲကိုပြောင်းဖို့ဘယ်လိုကြည့်ကြရအောင်။
YouTube အရုပ်သံလိုင်း၏ URL-လိပ်စာပြောင်းနည်း
အဆိုပါလူသိ YouTube ကို videoploschadka အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သင့်ချန်နယ်အား၏ URL ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ကိုအလွယ်တကူကိုယ်တိုင်လိပ်စာရိုက်ထည့်နိုင်ပရိသတ်ကိုမှသင့်အကောင့်ကိုပိုပြီးအမှတ်ရစရာဖြစ်စေတို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည် YouTube ပေါ်မှာ channel ကိုလိပ်စာကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လိုအပ်ချက်များကိုဒီတွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
YouTube ဝဘ်ဆိုက်များနှင့်မိုဘိုင်း application ကိုအပြည့်အဝဗားရှင်းကိုသင်တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြု setting များကိုပါရှိသည်။ ဒါဟာရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များ၏ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာဗီဒီယိုဖော်ပြရန်။ YouTube ကိုအလိုအလျှောက်သင်ကိုယ်တိုင်ဦးစားပေးများတွင်အချို့ setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရမယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နိုင်ငံတွင်လူကြိုက်များဗီဒီယိုများပြသရန်, သင့်တည်နေရာကို detect မရနိုင်ပါ။
Youtube ကိုအပေါ်မှတ်ချက် - ဤစာရေးသူနှင့်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူအကြားအပြန်အလှန်၏အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်မှတ်ချက်များအံ့မခန်းစက်နှိုးဆွေးနွေးမှုအတွက်စာရေးဆရာများ၏ပါဝင်မှုမရှိဘဲ။ စာသားအားလုံး monotonous မြို့ရိုးကိုသူများထဲတွင်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားရနိုင်ပါတယ်။ သေချာပါကချက်ချင်းသတိထားမိနှင့်ဆောင်းပါးပါလိမ့်မည်ကြောင်းစေရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်သည်။
YouTube အပလက်ဖောင်းသူတို့ကဒီ hosting အတွက်အပေါ် posted ပြီသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုများအပြည့်အဝအခွင့်အရေးကိုယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏသင်ပိတ်ဆို့ဗီဒီယိုကိုဖယ်ရှားခဲ့ကွောငျးတှေ့မွငျနိုငျ, ဒါမှမဟုတ်ချန်နယ်၏ရေးသားသူမရှိတော့ပါ။ သို့သော်ဤမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ရှုဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားလူအတော်များများဗီဒီယိုတစ်ကားကိုပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်လျှင်, ကမရှိတော့ကမြင်တွေ့နိုင်တယ်ထင် YouTube ကနေဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်း။
Channel ကိုနှင့် YouTube များအတွက်လိုဂို Creating
ဗီဒီယို၏ထောင့်တွင်အငယ်စားအိုင်ကွန် - YouTube ပေါ်မှာအတော်များများရေပန်းစား channel များကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုရှိသည်။ ဤသည် element က roller စိတ်ကြိုက်အဘို့နှင့်အကြောင်းအရာကာကွယ်မှုအစီအမံအဖြစ်လက်မှတ်တစ်မျိုးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့တစ်လိုဂိုနှင့်မည်သို့ YouTube ကိုက upload တင်မှဖန်တီးနိုင်ပုံကိုသင်ပြောပြချင်။
သင့် TV ရန်သင့် YouTube အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်ရန် code ကိုရိုက်ထည့်ပါ
Wi-Fi ကိုတစ်ဦးဝင်းအသုံးပြုခြင်း, အသုံးပြုသူတစ်ဦးတိကျတဲ့ code ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သင့် TV မှမိုဘိုင်းကိရိယာသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, လော့ဂ်နှင့်သင့်တီဗီပေါ်တွင်သင်၏ယူကျု့အကောင့်ထပ်တူပြုပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုလျက်, တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံ profile များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
တက်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် YouTube ပေါ်မှာ Stream ကို run
အခုတော့ကြည့်ရှုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားရေပန်းစားလှုပ်ရှားမှုစီး။ stream ဂိမ်းများ, ဂီတ, ပြပွဲနှင့်ပိုပြီး။ သင်သည်သင်၏ထုတ်လွှင့်စတင်ချင်လျှင်, သင်ရရှိနိုင်ပါတစ်ဦးတည်းသာ program များနှင့်အချို့သောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သင် YouTube ပေါ်မှာတစ်အလုပ်လုပ်ထုတ်လွှင့်ဖန်တီးရန်မပြဿနာများရှိသည်လိမ့်မယ်။
YouTube ပေါ်မှာလှူဒါန်းမှု Configuring
YouTube ပေါ်ကစီးကနေအကျိုး, သငျသညျအခွားသူမြား၏အလှူငွေများကိုကျေးဇူးတင်သောကြောင့်လည်းရည်ညွှန်းသို့မဟုတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အနှစ်သာရအသုံးပြုသူက link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကြောင့်လူတယောက်ငွေပမာဏရန်သင့်အားပို့ပေး, အဲဒီနောက် streamers အပေါ်တစ်ဦးအသိပေးစာလည်းမရှိ, ပရိသတ်ကို၏ကျန်မြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်။ လှူဒါန်းမှုဒီ stream ချိတ်ဆက်ခြင်းတဦးတည်းတစ်ခုတည်းအစီအစဉ်နှင့်အထူးသ Donati စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် website တစ်ခုသုံးပြီးအများအပြားခြေလှမ်းများအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
YouTube ကို client ကို Sony ကတီဗီအပေါ်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
Sony ကနေစမတ်တီဗီပေါ်တွင် firmware ကို update လုပ်ပေးခြင်းပြီးနောက်အတော်များများအသုံးပြုသူများ Youtube ကို app ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ယနေ့တွင်ကြှနျုပျတို့သညျဤစစ်ဆင်ရေးထွက်တင်ဆောင်လာသော၏နည်းလမ်းများပြသချင်တယ်။ တစ်ဦး Vewd (ယခင်အော်ပရာတီဗီ), သို့မဟုတ် Android တီဗွီပလက်ဖောင်း (ထိုကဲ့သို့သော device များအတွက် optimized ကြောင်းမိုဘိုင်း OS ဗားရှင်း) running "Smart တီဗီ" Sony က - သင်ကအောက်ပါအချက်ကိုသတိပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်အကို YouTube app ကိုပထမဦးဆုံးအရာဒိတ်လုပ်ပါ။
YouTube ပေါ်မှာပွင့်လင်း subscription ကို
သင်ချန်နယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုသူကိုအသုံးပြုသူများသည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များတွေ့နိုင်ပါသည်ချင်လျှင်, settings ကိုအချို့ပြောင်းလဲရန်။ ဤသည် YouTube အက်မှတဆင့်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကိုကြည့်ကြရအောင်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုသွားပါ, ပြီးတော့ညာဘက်ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်သောအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ, နှင့် "YouTube ကို setting များကို" ကိုသွားပါ, ဂီယာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: တိုက်ရိုက်က်ဘ်ဆိုက် Youtube ကိုမှတဆင့်တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာတည်းဖြတ်ရေးဖျော်ဖြေဖို့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် YouTube စာရင်းသွင်းကိုဖွင့်, သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
YouTube ပေါ်မှာတစ်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုအားရှာဖွေခြင်း, သင်က၎င်း၏ရက်ရက်ရောရောလိုပဲကအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေဖို့။ အဆိုပါထောက်ခံဒေသများဒီ option ရှိသည်တို့တွင်အသို့သော်အကောင်းဆုံးအရာအမှု၌၎င်း, ယေဘုယျအားဖြင့်စေလွှတ်ခံရဖို့အားလုံးမဟုတ် "အရပျကို" ပုံမှန်သတင်းစကားထဲမှာဥပမာအားယင်း၏နောက်ဆက်တွဲတင်ပို့, အတူလင့်များတက်မှတ်တမ်းတင်များအတွက် universal ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
YouTube ကို hosting ဗီဒီယို Analogues
အင်တာနက်ကိုတွင် YouTube ကိုဆင်တူအများအပြားဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ သူတို့က interface နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်ကွာခြားပေမယ့်တူညီရှိပါတယ်။ အခြားသူများကိုဒေသတွင်း၌ဥပမာ, ကကော်ပီကူးခြင်းနှင့်လူကြိုက်များမှုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ကြစဉ်န်ဆောင်မှုအချို့ကို YouTube ကို၏ထွန်းမတိုင်မီဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်အချို့သောထူးခြားတဲ့ယူကျု့ဗီဒီယိုကိုခွဲဝေမှုမှာကြည့်ပါ။
YouTube ပေါ်မှာစီးဆင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက် Twitch
တချို့က streamers တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်မှုအတွက်မျိုးစုံန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်လိုလားကြပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဒီစည်းကိုအကို YouTube နှင့် Twitch ဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒီနှစျခုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်ထုတ်လွှင့်ဖွင့်လှစ်, သင်ရိုးရှင်းစွာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကိုပြေးနိုင်ပေမယ့်ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့နှင့်အဓိပ်ပါယျမရှိသောဖြစ်ပါတယ်။